I-Galaxy S10: isivamvo esicothayo seminwe, ukuhleka kobuso | IPhone iindaba
ULuis Padilla | | Android, Izaziso
Iflegi yakwaSamsung yamva nje, iGPS S10 +, sisiphelo sendlela esidibanisa uyilo olugqwesileyo kunye nezixhobo ezinomtsalane. Uphawu lwaseKorea lufezekisile kwisiphelo sendlela ngescreen esigcweleyo, ewe, ukuhambisa inotshi esembindini yeemodeli ezikhuphisanayo kwelinye lamacala kusetyenziswa isikrufu, onokuyithanda ngaphezulu okanye ngaphantsi, kodwa ubuncinci yeyona ndlela yenyani ekufuneka siyibulele ngala maxesha apho wonke umntu ebonakala ekhathazekile ngokukopa iApple.
Nangona kunjalo, ukufezekisa olu luyilo kunye nokususa inzwa yeminwe yangemva, egxekwa ngakumbi, iSamsung ikhethe ukudibanisa isivamvo seminwe esingaphantsi kwesikrini. Itekhnoloji eboniswe ixesha elide kwaye uninzi aluqondi ukuba kutheni iApple ingamkeli i-ID yobuso endaweni yoko. Ukuchitha kunye nokuqwalaselwa kobuso kwe-iPhone kuya kunceda ekupheliseni inotshi, kodwa iimvavanyo zokuqala ze-S10 + zibonakala zibonisa ukuba kutheni iApple iqhubeka nenotshi yayo kunye ne-ID yayo yobuso.
1 Ukucotha kunye nokungachaneki kweminwe yeminwe
2 Ukuba ufuna ukubonwa kakuhle kobuso, ufuna inotshi
Ukucotha kunye nokungachaneki kweminwe yeminwe
Inzwa yeminwe edityanisiweyo phantsi kwescreen se-S10 entsha + isebenzisa itekhnoloji ye-ultrasonic ukubona iminwe yomsebenzisi kunye nokuvula i-terminal. Yindawo ethe ngqo kwiscreen, ke xa ukhutshiwe kufuneka uyazi kakuhle ukuba uza kuwubeka phi umnwe ukuze uyiqonde, nangona iscreen sijikile siyakubonisa indawo oza kuyibeka kuyo. Ingxaki kukuba iyacotha, kwaye njengoko sinokubona kumfanekiso ongentla, uthathwe kuphononongo lweVerge, ifuna iinzame ezininzi de kube kuvulwe i-terminal. Kusikhumbuza kakuhle isizukulwana sokuqala se-ID yesazisi, esasifuna ixesha elithile ngaphambi kokuba sikwazi ukubona umnwe owawubeke kwisenzisi somnwe. Kwisizukulwana sesibini seTouch ID oku kuphuculwe kwaye ukwamkelwa kwenzeka ngokukhawuleza.
Ukuba ufuna ukubonwa kakuhle kobuso, ufuna inotshi
Inotshi ayikho kwi-iPhone yi-Apple's whim, ngokuchaseneyo. Itekhnoloji eyaziwayo yobuso efuna iikhamera ezininzi kunye neenzwa ezingenakufihlwa phantsi kwesikrini. Ngaphandle kwento yokuba iimodeli ezingenakubalwa ezikhuphisanayo zikope inotshi, zikwenze oko ngenxa yezizathu zobuhle, kuba akukho phawu luphumeleleyo ukubonwa ebusweni olungasondelanga kwa-Apple. Isamsung inikezela ukubonwa kobuso kwi-S10 yayo, kodwa njengoko sinokubona emfanekisweni, ividiyo kwiscreen sakho se-iPhone inokuvula i-S10 +.
Ngokukodwa kwiminyaka embalwa siyakuba netekhnoloji evumela ifowuni eyi-100% yesikrini, kodwa namhlanje, ukuba sifuna inkqubo yokhuseleko ekhawulezayo, ethembekileyo nekhuselekileyo, kubonakala ngathi ezinye iindlela ezinikezelwa ngabavelisi kukwamkelwa kobuso buka-Apple kwaye inotshi yayo isekude ukufezekisa. Mna ngokwam ndigcina inotshi yam kunye ne-ID yobuso yam ndiyibonile endikubonileyo. Ukuba ufuna ukubona uphononongo olupheleleyo lweVerge, ngezantsi unayo ividiyo endisuse kuyo le mifanekiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Ukhuphiswano » Android » I-Galaxy S10: isivamvo esicothayo seminwe, ukuhleka kobuso
Ekugqibeleni yonke into iyaphuma. Besele ndiyazi (kwaye andifuni kuba sisilumko) ukuba into efanayo izakwenzeka. Inzwa yeminwe phantsi kwesikrini !!!! Oohh! Ukuqwalaselwa kobuso !! Oooh! Xa iApple ingasusi inotshi yento eza kuba yiyo. Ukubeka phambili ukhuseleko kunye nokusebenza ngaphezulu kwe-aesthetics. Xa kuziwa ekuqwalaselweni kobuso, iAppel isengaphambili kwabakhuphisana nabo. Kwaye ukuba ngenye imini ibeka ukubonwa kweminwe phantsi kwescreen okanye kunciphisa inotshi, iya kuba ngaphandle kokususa iota yokhuseleko.
Nantsi into ehlekisayo ngamaxabiso e-iPhone (kwaye ke intengiso yazo). Kwaye sele ndikuxelele ukuba ukuba abantu abaninzi bebengasetyenziswa kakhulu kwi-IOS, kwaye becinga ukuba ukusebenzisa i-Android yinto efana ne "programming kwi-linux okanye ezo zinto ze-geek" u-Apple waphinda waluma uthuli njengenkampani, kuya kufuneka ubone iqhubu ezenzekileyo kwiintengiso zabo…. Inyani yile yokuba bayaqhubeka nokuphila kwimali engenayo eyashiywa nguSteve Jobs nge-iPhone yakhe yokuqala, eyayiyinto entle kwaye kwakungekho nto kwintengiso esondeleyo (ukusuka kwi-iPhone 5 kuyo yonke into yayilingana). Okwangoku nawuphi na umenzi waseTshayina unezinto ezintsha ngakumbi kune-Apple kwaye ngaphezulu kokufika konyaka omnye ngaphambili, kwaye ekugqibeleni iApple iyazidinga kwizinto zayo zangaphakathi… .. Ngoku wonke umntu uyayisusa inotshi kuba iphelelwe yimfashini kwaye ngoba iyinyani. kukuphambuka kuyilo. Ndinabantu abaninzi endibaziyo neXiaomis kunye neHuaweis kunee-iPhones, kwaye oku kwiminyaka embalwa edlulileyo kwakungacingeki. Ungasathethi ke ngeencwadana zamanqaku ezintsha ezithathayo ezisusa ii-hiccups kunye neeMacBooks kunye namaxabiso azo nawo ahlekisa.
Kwaye ubeke eli gqabaza kwinqaku malunga nefowuni ebiza imali efanayo ne-iPhone kunye nomenzi wentengiso ewile ngaphezulu kwe-Apple ...
I-Apple iwa ngasemva ...
Ndivumelana ngokupheleleyo nawe Hummer, jonga nje imigaqo ye-VIVO NEX DUAL SCREEN, uphawu lwesiTshayina olunika izithuba ezi-2 eziluncedo kwii-iPhone Xs, nakweyiphi na into othelekisa kuyo, kubandakanya nexabiso!
Ixabisa kuphela i-HALF yeendleko ze-iPhone Xs
Imilenze emibini phambi kwe-Iphone Xs? Kubonakala kum ukuba uphazamile. Kwaye iApple ihlala kwingeniso kaSteve Jobs? Ndiyacela. Ngaphandle komgangatho weemveliso zayo, ii-IOs zingaphezulu kakhulu kwi-Android. Lilonke, iApple inezona ziphelo zibalaseleyo nezikhuselekileyo.
ILuis Angel Acosta sitsho
Ifowuni egqwesileyo i-Samsung S10 xa iyonke, nayo yonke imisebenzi yokusika, ngakumbi ikhamera enemowudi ebanzi. Ndicinga ukuba i-Android iguqukele kwinqanaba le-iOS ukuba sithetha nje ngokubanzi, kodwa ayinakuphikiswa into yokuba i-IOS inethuba elikhulu lokuxhasa kunye nohlaziyo lweminyaka emininzi kune-Android (ngamanqanaba kunye neempawu ezahlukeneyo zezixhobo ezisebenza nge-Android OS ) kwaye Oku kukuvumela ukuba usebenzise i-iPhone yakho ixesha elide (ngokutyibilikayo), kwaye yenziwa ibaluleke ngakumbi ngamaxabiso aphezulu eefowuni zePremiyamu kuzo zombini iApple kunye neSAMSUNG.
Phendula uLuís Ángel Acosta